Tababare Zidane oo walwal hor leh ku abuuray kooxda Real Madrid labo maalin kaddib markii uu u qaaday koobka horyaalka La Liga – Gool FM
Tababare Zidane oo walwal hor leh ku abuuray kooxda Real Madrid labo maalin kaddib markii uu u qaaday koobka horyaalka La Liga
(Madrid) 18 Luulyo 2020. Sida wararku ay sheegayaan Tababare Zidane ayaa walwal hor leh ku abuuray kooxda kubadda cagta Real Madrid, inkastoo labo maalmood ka hor uu u gacan geliyey koobka horyaalka La Liga.
Macallin Zinedine Zidane ayaa iska diiday inuu xaqiijiyo inuu sii ahaan doono Tababaraha kooxda Real Madrid ee kal ciyaareedka soo aaddan, iyadoo xitaa weli la la xiriirinayo Kooxda Juventus.
Waxaa Zidane si xoog leh loola xiriirinayey inuu bedel u noqonayo Max Allegri intii u dhaxeysay 2018 iyo 2019, kaddib markii uu ka tagay Real Madrid xilli ay qaadeen koobkoodii saddexaad oo xiriir ah ee Champions League.
Zidane ayaa ugu dambeyn ku laabtay garoonka Santiago Bernabeu xilli ciyaareedkii la soo dhaafay, waxaana ay shalay u dabaal-degeen hanashada horyaalka La Liga, kaasoo ahaa koobkoodii 34-aad ee horyaalka La Liga oo ay Los Blancos kor u qaaddo.
Dhinaca kale Juventus ayaa macallinkeeda u magacaabatay Maurizio Sarri, laakiin waxaa laga yaabaa inay u laabtaan Zizou kaasoo sheegay inuusan ogeyn haddii uu tababare ka sii ahaan doono kooxda Real Madrid, waana hadal ka nixiyey Los Blancos.
isagoo ku guda jira shirkiisa jaraa’id waxa uu yiri Zidane: “Cidna ma oga waxa dhici doona, qandaraas ayaan ku jiraa, waan jeclahay inaan halkaan sii joogo, laakiin marnaba ma ogaan kartid waxa dhici doona mustaqbalka marka aad ka shaqeyneyso kubadda cagta”
“Maalinba maalinta xigta waxaa dhici kara isbedel marka aad isboortigaan dhex joogto, mana garanayo waxa dhici doona mustaqbalka” ayuu hadalkiisa ku daray hoggaamiyaha reer France.
48-sano jirkaan ayaa labo koob oo horyaalka Serie A ah la qaaday Juventus intii u dhaxeysay 1996 iyo 2001, isagoo sidoo kale la gaaray final-ka Champions League, waxaana Zidane la la xiriirinayay inuu dib ugu laabanayo magaalada Turin bishii April, markii la sheegay inay isku dheceen maamulka Real Madrid.
RASMI: Liiska xiddigaha Kooxda Barcelona ay habeen dambe kala hortagayso Alaves oo la shaaciyey… (Labo xiddig muhiim ah oo ganaax ku maqan)